Sorona Masina etsy Mahamasina rahampitso : hanafatrafatra ny mpitondra ny kardinaly Parolin | NewsMada
Sorona Masina etsy Mahamasina rahampitso : hanafatrafatra ny mpitondra ny kardinaly Parolin
Hatao etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina rahampitso, ny sorona Masina fanamarihana ny faha-50 taona nifandraisantsika amin’ny any Vatikana. Hitarika izany ny sekreteram-panjakan’i Vatikana, ny kardinaly Pietro Parolin sy ireo evekan’i Madagasikara (Cem).
Na tsy hivantana amin’ny maha diplaomaty nefa koa amin’ny maha iraky ny papa François azy, tsy azo ihodivirana ny hafatra mafonja hampitainy ho an’ny mpitondra. Holaroina amin’ny tenin’ny Soratra Masina izany, toy ny fanaon’ny fivondronamben’ny eveka (Cem). Ho voaasa eo rahateo avokoa ireo mpitondra tao anatin’ny 50 taona. Anisan’izany ny filoha am-perinasa sy ireo filoha teo aloha rehetra. Tsiahivina fa afa nihaona tamin’ireo papa nifandimby tany Vatikana avokoa ireo mpitondra antsika. Teo koa ireo efa nitsidika ny tany amin’ny tany masina, toy ny tany Jerosalema sy ny tendrombohitr’i Sinai. Mahasarotiny ny eo anivon’ny fiketrahana Masina araka ny nambaran’ny solontenan’ny papa, ny Mgr Paolo Rocco Gualtieri tamin’ny alatsinainy teo tetsy Antanimena ny fiarovana ny zo aman-kasina maha olona. Ny fiadanana sy ny filaminana ary ny fitoniana… Voahaja sy tanteraka eto amintsika izany ? Hialohavan’ny fihaonan’ny eveka amin’ny kardinaly Pietro Parolin, anio eny Ambatoroka rahateo ny sorona Masina hitondrana ny toriteny sy ny hafatra rahampitso ity. Mazava avokoa ireo hafatry ny eveka intelo miantoana tamin’ny taona lasa nanitrikitrikitra ny tsy fandehanan’ny raharaham-pirenena amin’ny laoniny. Midika izany fa hafonja ny hafatra, ankoatra ny hafatra manokana avy amin’ny papa François, ho entin’ny kardinaly Parolin. Tombanana fa samy hahazo ny anjarany avokoa ny mpitondra sy ny vahoaka ary ny kristianina.
Fanarahana ny fandaminana rehetra
Etsy andaniny, efa mandeha ny fanentanana ny mpino katolika hanofahofa ny sainam-pirenena Malagasy sy ny sain’i Vatikana (fotsy sy mavo). Hivoha amin’ny 6 ora maraina ny vavahady rehetra etsy Mahamasina, rahampitso. Eny amin’ny « tribune » ireo nahazo fanasana raha eny amin’ny « gradins » kosa ny kristianina ka miditra amin’ireo vavahady amin’ny sisiny avokoa. Hipetrahan’ny antoko mpihira sy ny mpianatry ny sekoly katolika kosa ny afovoan’ny « gradins ». Hanao fanamiana manokana ireo pretra sy ireo fikambanana masina samihafa. Hiantsona eo Antanimbarinandriana sy ny Ste Famille ary Md Misely Mahamasina ny fiara rehetra. « Tokony hisatroka sy hitondra rano amin’ny tavohagany plastika ny rehetra noho ny hafanana… Aoka hanaraka ny toromarika sy ny fandaminana isika rehetra », hoy ny tompon’andraikitra.
Araka izany, hitodika eny Mahamasina indray ny mason’ny kristianina sy ny vahoaka malagasy, rahampitso.